तीते करेलाको अद्धितीय गुणहरु एक हप्तामै यसरी निको पार्छ यी रोगहरु – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
खाँदा तितो तर औषधिको रुपमा हेरिने करेला मानव शरीरका लागि निकै फाइदाजनक छ । करेलाले भोक जगाउनुको साथै घाम बाट पनि बचाउने गर्दछ ।
थाहा पाउनुस् करेलाका फाइदाहरुः – खानामा रुचि बढाउँछ । – छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ । – खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ । – पेटसफा राख्दछ । – कब्जियत हुन दिँदैन । – पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै, ग्याष्ट्रिक, अल्सर आदिलाई कम गर्दै लैजान्छ । – रगत शुद्धीकरण गरी सफा राख्न मद्दत गर्छ ।
– मधुमेह रोगीलाई– इन्सुलिनको काम गर्छ । – यसले छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै यस्तै हात खुट्टाका जोर्नी दुख्ने वा बाथ रोग भएको, पिसाब पोल्ने, पत्थर भएका, अम्लपित्त, (हैजाजस्ता रोगमा करेलाको सेवनबाट फाइदा गर्छ । – तीते करेलालाई उमाल्दा यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट उत्पन्न हुन्छ, जसले क्यान्सरको सम्भावनालाई घटाउँछ ।
– औषधिको रूपमा तीते करेलको हरेक भाग जस्तै फल, पात, बियाँ, जरा आदि विभिन्न प्रकारका रोगको उपचारका लागि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । – तीते करेलका बियाँ पेटमा जुका लागेको खण्डमा तीते करेलाको बियाँलाई पिनेर सेवन गरेमा यसले पेटमा भएको जुकालाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
– साना केटाकेटीलाई झाडा वा वान्ता भइरहेमा तीनवटा करेलाको बियाँ र तीनवटा मरिच पिनेर धूलो गरी पानीसँग खुवाइदिएमा झाडा वा वान्तारोकिन्छ । – मधुमेह रोगीले तीतेकरेलाको धूलो बिहानबेलुका एक एक चम्चा खाइदिएमा यसले इन्सुलिनको काम गर्छ । – तीतेकरेलाको पात पिसेर लेप बनाएर लगाएमा छालाको रोग निको हुन्छ । – आगाले पोलेको ठाउँमा लगाइदिँदा फाइदा गर्छ ।
– तीते करेलाको पात आगोमा तताएर सिधेनुन सँग खानाअघि खाएमा अम्लपित्त रोगमा फाइदा गर्छ । – बर्षा याममा हैजा लागेको शङ्का लागेमा वाहैजाको पहिलो चरणमा छ भने करेलाको रस वा पातको रस खाएमा फाइदा गर्छ । यसका लागि (दुई चिया चम्चा रसमा त्यति नै मात्रा सेतो प्याजको रस मिलाई खानुपर्दछ ।
– तीते करेलाको जरालाई पिसेर लेप बनाएर पाइल्समा लगाए यसले फाइदा गर्छ । – तीते करेलाको जराको रसमा बराबरमात्रामा मह वा तुलसीको रस मिसाएर दिनहुँ राति एक महिना जति खाएमा श्वासप्रश्वास समबन्धी रोग (स्तै चिसो लाग्ने, दम, ब्रोन्काइटिस, घाँटीको रोग आदिबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । अन्य उपयोगितास् तीते करेलाको दिनहुँ सेवनले शरीरको तौल कम गर्न वा घटाउन मद्दत गर्छ ।
तीते करैलाको सेवनबाट पेटको क्यान्सर र मधुमेह निको पार्न सकिन्छ
तीते करैला र पेट संबद्ध क्यान्सर पेट संबद्ध क्यान्सर भनेको यस्तो बेथा हो जुन अत्यन्तै तीर्व गतिमा फैलिने गर्छ र साधारण उपचार जस्तै केमोथेरापी र रेडियोथेरापीलाई समेत टेरदैन । अमेरिकाको कोलोराडो विश्वविधालयमा तीते करैलाको प्रयोग पेटका क्यान्सर रोगीमा गरिएको थियो । पेट संबद्ध क्यान्सरका चार विभिन्न लाइनमा गरिएको अध्यन जुनमा प्यानक्रियाटिक क्यान्सर सेलका बारेमा अध्ययन गरिएको थियो । उक्त अनुसन्धान अनुसार तिते करैलाको प्रयोगबाट पेटको क्यन्सर र मधुमेहको सघन उपचार हुन सक्ने पत्तो लागेको छ ।
तितो करेलाले कस्ता रोगहरु निको पार्छ रु थाहा पाईराख्नुहोस्
श्वासप्रश्वास समस्यामा ताजा करेला दम, रुघाखोकीजस्ता श्वासप्रश्वासको समस्या भएका विरामीका लागि अत्यन्तै लागदायक हुन्छ ।
लिभर टनिक दैनिक एक गिलास करेलाको जुसले कलेजोको समस्या समाधान हुन्छ । तर, अहिले खाएर भरेनै यसको असर खोज्नुभयो भने तपाई गलत साबित हुनुहुने छ । यसले स्वास्थ्यमा पारेको सकारात्मक असर बुुझ्न कम्तीमा पनि एक साता करेलाको जुस पिउनुु पर्ने हुन्छ ।
रोग प्रतिरोधक पानीमा उमालेको करेलाको पात दिनहुँ खानाले शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।
डण्डीफोरमा करेलाको सेवनले डण्डीफोर, दागलगायतका छालाको संक्रमण हटाउनुका साथै रगतमा भएको अनियमितता हटाउछ । कागती मिसाएको करेलाको जुस ६ महिनासम्म खाली पेटमा खानाले अनुहारको सुन्दरतामा निखार ल्याउछ ।
मधुमेह करेलाको जुसले टाइप टु मधुमेहलाई सबैभन्दा बढी लाभ मिल्छ । चिनिया र भारतीय प्राचिन चिकित्सा पद्दतिमा करेला लामोसमयदेखि प्रयोग हुँदैं आएको विश्वास गरिन्छ । हालै भएका अनुसन्धानले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
कब्जियतमा यसमा भएका फाइबरहरुले खाना पचाउन मद्दत गर्छन् । यसले गर्दा कब्जियतको समस्या पनि हट्छ ।
छालाको समस्यामा करेलाको नियमित सेवनले छालालाई चम्किलो राख्न मद्दत गर्नुका साथै दागरहित बनाउन मद्दत गर्छ । छालाका रोग तथा संक्रमण हटाउछ । यसमा भएको भिटामिन सिले चाउरीपना हटाउछ ।
मिर्गौला र ब्लाडर यसले कलेजो र ब्लाडरलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ । यसका साथै मिर्गौलाको पत्थरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ ।
मुटुको रोग यो मुटुको समस्याका लागि पनि लाभदायी मानिन्छ । यसले शरीरमा भएको खराब कोलेष्टेरोल हटाई हृदयाघात हुने सम्भावना कम गर्छ । यसले रगतमा चिनीकोमात्र घटाई मुटुलाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ ।
तौल घटाउन यसमा भएका एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ । यसले मेटाबोलिजम र पाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने भएकाले चााँडो चाँडो तौल घटाउन यसले मद्दत गर्छ । एजेन्सी
खुल्ला भएसँगै विप्लबको घोषणा : तीनबुँदे सहमतिप्रति प्रतिवद्ध ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
विप्लव नेकपा र सरकार बीच तीनबुद्दे सहमति सँगै विप्लवका एक हजार बढी नेता कार्यकर्ता रिहा हुँदै। ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
सरकार र विप्लव नेकपा वार्ता सम्पन्न, थप वार्ता हुँदै जाने। ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
सरकार र विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेकपा बीच वार्ता हुने, बादल र प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन। ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
नारायणगढमा साईबर क्राईम सम्बन्धी जन–चेतना मूलक कार्यक्रम सम्पन्न। ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
सेटिङ्गमैं दैनिक सयौंको संख्यामा गाई गोरुको तस्करी, प्रहरी प्रशासन मुकर्दशक ! ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर ! ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
भरतपुरमा निशानको म्याग्नाइट गाडीको बिक्री शुभारम्भ ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
न्यायपालिकाको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
पल शाहको जन्मदिन : मानवका लागि मानव सहयोगी केन्द्रमा । ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
बृद्धा बाबाहजुर हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न चितवन प्रहरी सफल। ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४
नेकपा ओली समूह चितवनको अध्यक्षमा रावल, सचिवमा खनाल चयन। ३० कार्तिक २०७६, शनिबार ०९:४४